မောင်ရင်ငတေ ** MAUNGYINNGATAY **** မောင်ရင်ငတေ ***: ** မြေထဲပင်လယ်ရေစီးသံ * **
အကြောင်းတွေနဲ့ လှူကြတန်းကြ ကယ်ဆယ်ကြနဲ့ မကြာပါဘူးကွာ၊ အနီ … . ...... အနီမှအနီ ရဲရဲနီ မင်းလည်းနီ ငါလည်းနီ ခါတော်မီလည်းနီ ဆိုပြီးတော့ အနီရောင်လှိုင်းတပိုးတွေကြား မျောလို့ပါသွား လိုက်ကျတာ မင်းကိုတောင် မေ့ထားလိုက်ကြတယ် ထင်ပါရဲ့၊ ဟဲ ဟဲ … .. မင်းကတော့ ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ လက်ပိုက်ကာသာ ကြည့်နေမယ်ဆိုတာ ….. ငါ မြင်ယောင်နေပါတယ်ကွာ၊ အေးလေ ဘာပြောပြော မင်းရင်ခွင် အနားမှာ နေကြသူတွေက မင်းကို ချစ်ကြသလို … ….... မင်းကလည်း ချစ်တယ်ဆိုတာ ငါ ယုံပါတယ်၊ အေး ဒါတွေ ထားပါတော့ကွာ၊ ပြောကြတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါ၊
ငါကတော့ ဥရောပမြေကို ရောက်လာပြီး လူကြုံကောင်းတိုင်း ဟိုသွားဒီသွား သွားရင်းနဲ့ ချောင်းဝတို့ မြစ်ဝတို့ကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေ့ါ၊ အဲဒီမှာ မြစ်ရေနဲ့ ပင်လယ်ရေက အမြဲယှဉ်တွဲ နေတယ်ဆိုတာကို သွားမြင်တာကွ၊ ဥရောပရဲ့ မြစ်တွေ ချောင်းတွေကလည်း ခပ်သေးသေးကိုး၊ ရေစီး ဆိုတာကလည်း မင်းတို့လို မဟုတ်ဘူးလေ၊ တချို့မြစ်ဝချောင်းဝတွေဆိုရင် ခပ်သေးသေးဆိုတော့ ပင်လယ် ဒီရေကျ ချိန်မှာသာ မြစ်ချောင်းရေတွေက ပင်လယ်ထဲစီးဝင်နိုင်တာ၊ ပင်လယ်ဒီရေတက်ချိန် ဆိုလာရင်တော့ မြစ်ချောင်းရေက ပင်လယ်ထဲ ဘယ်လိုမှ မစီးဝင်နိုင်တော့ဘူးပေ့ါကွာ၊ အဲဒါမျိုးကို ငါကထိုင်စောင့်ပြီး ကြည့်ရတာကို ဝါသနာပါတာကွာ၊ ဒီက လမ်းတွေကလည်း မြစ်စမြစ်ဆုံး တောက်လျှောက်ဆိုသလို ဖောက်ထားတာဆိုတော့ ငါသွားချင်တဲ့ နေရာတွေကိုမြစ်ဝတွေကို သွားရင်းလာရင်း ရောက်ဖြစ်ဖို့က လွယ်တာပေ့ါကွာ၊
ဒီနှစ်ဒီတခေါက် ငါသွားဖြစ်ခဲ့တာ ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာ ဥရောပမြေ အာဖရိကမြေနဲ့ ငါတို့ အာရှမြေအထိ
ဆက်စပ်နေတဲ့ Mer Méditerranée လို့ ပြင်သစ်လိုခေါ်ကြတဲ့ မြေထဲပင်လယ်ဆိုတာကြီးဆီကို ပေ့ါ၊
Méditerranée ဆိုတာကိုက လက်တင်လို MediTerra (Mediterraneus) ကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့
တာလို့ ဆိုထားတော့ကွာ ငါဒို့ရွှေဗမာလိုဆိုရင် မြေအထဲကပင်လယ်ပေ့ါနော်၊ Méditerranée ဆိုပြီး
အဲဒီလို ကုန်းမြေကြီးတွေ ပိတ်လုပိတ်ခင် နီးပါး မြေအထဲက ပင်လယ် ဆိုတာတွေ ကိုယ်ပိုင် နာမည်
အမျိုးမျိုးနဲ့ အများကြီး ရှိပေမယ့်လည်း အဲဒီ ငါ အခု ရောက်ခဲ့တဲ့ မြေအထဲက ပင်လယ်ကြီးကိုတော့ အကြီးဆုံး အကျယ်ဆုံးမို့လို့လားတော့ မသိပါဘူး . . …… … …. … သီးခြားအမည်နဲ့ မခေါ်ကြပါဘဲ Mer Méditerranée လို့ ခေါ်ကြတာ ထင်ပါရဲ့ကွာ၊ ဒို့ ဗမာစာမှာတော့ ဗမာလို ရေးကြတာကတော့ မြေထဲပင်လယ် ပေါ့၊ သူနဲ့ တဆက်တည်း နာမည်ကျော် Mer Noire (Black Sea) ပင်လယ်နက် ဆို တာကိုတော့ မြေထဲပင်လယ်ဆိုပြီး ဘယ်သူမှမခေါ်ကြဘူးလေကွာ၊ တကယ်တော့ ပင်လယ်နက်က လည်း ကုန်းပိတ်လုနီးပါး ဖြစ်နေတဲ့ မြေအထဲက ပင်လယ်တခု မဟုတ်လား၊
ဒီ မြေထဲပင်လယ်ကြီးရဲ့ ၂၅ နိုင်ငံသော ကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံတွေရဲ့ စုစုပေါင်း ကမ်းရိုးတန်းအရှည်က
ကီလိုမီတာပေါင်း လေးသောင်းခြောက်ထောင် မိုင်နဲ့ဆိုရင်တော့ သုံးသောင်းလောက် ရှိတာပေါ့ကွာ၊
လစ်ဗျားနဲ့ အီဂျစ်က ကီလိုမီတာ သုံးထောင်လောက်ရှိတဲ့ ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ ကမ်းရိုးတန်းတွေက တောင်ခြေနဲ့ ပင်လယ်ရေက ထိစပ်နေသလို လို့ ဆိုတယ်ကွ၊ အခုတခေါက် ငါ ရောက်ခဲ့သွားခဲ့တာက ကီလိုမီတာ သုံးရာကျော်လောက်တော့ ရှိမယ်ထင်ပါရဲ့၊ ကမ်းရိုးတန်းအရှည် စုစုပေါင်းက လေးသောင်းခွဲကျော်ဆိုတော့ ငါသွားခဲ့တဲ့ ကမ်းရိုးတန်းအရှည်က ဘာမှတော့မရှိပါဘူး၊
ဒါပေမယ့် ငါရောက်ခဲ့သမျှလေးတော့ မင်းကို ဖောက်သည်ချချင် မိရတာပေ့ါကွာ၊
အဲလို မြေထဲပင်လယ်ဆိုတာကြီးရဲ့ လှိုင်းပုတ်သံတွေကို ငါကြားလိုက်ရရင်း ဒီ မြေထဲပင်လယ်ထဲကို
ခပ်တိုးတိုး ခပ်သာသာ စီးဆင်းနေကြတဲ့ မြစ်လို့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ ရေချောင်းလေးတွေရဲ့ ရေစီးသံလေး
တွေကိုလည်း ငါ နားထောင်ခဲ့ရတယ်ကွ၊
ဒီနေရာမှာ သူတို့ရဲ့ ရေးဗား ခေါ်တဲ့ မြစ်အကျယ်က မင်းတို့ ငါတို့ဆီက ချောင်းသာသာ တချို့ဆိုရင်
မြောင်းသာသာသာပေ့ါ . … … .. .. . .. တချို့ဆိုရင်တော့ကွာ တကယ့်ကို ငါတို့ အညာက မိုးတွင်း မိုးသည်းသည်းရွာမှ ချောင်းရေကျတတ်တဲ့ ချောင်းခြောက်သာသာ ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ သတိပြု ရမယ်ပေ့ါ၊ တချို့ ငါတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဲ ချောင်းခြောက်တွေက ရေစီးသံ နားထောင်ဖို့ နေနေသာသာကွာ၊
တချို့ဆို စီးစရာ ရေကို မရှိတာကွ၊
မြို့လယ်ခေါင်ကို ဖြတ်စီးသွားတဲ့ နေရာတွေမှာ အဲဒီ မြစ်တွေ ချောင်းတွေ မြောင်းတွေ ပေါ်မှာ အဖုံး ဖုံးထားသလိုသာကွာ …. ..… ငါတို့ ရန်ကုန်က မြို့ထဲလမ်းတွေမှာ မြောင်းဖုံးတွေ ဖုံးထားသလို ပေ့ါ၊ သူတို့က အဲဒီ မြို့လယ်ကို ဖြတ်သွားတဲ့ မြစ်အပေါ်မှာ ပန်းခြံတွေ လမ်းတွေ အိမ်တွေ ဆောက်ထား လိုက်တော့ ချောင်းဆိုတာပျောက် မြောင်းဆိုတာပျောက်ပြီး မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းတွေ လိုလို ဖြစ် ကုန်တာပေါ့၊ မိုးများများ ရွာရင်ရွာ ဒါမှမဟုတ် ဆောင်းကုန်လို့ တောင်ပေါ်က နှင်းတွေ အရည်ပျော် ကျချိန်ဆိုရင် ရေနည်းနည်းပါးပါး (သူတို့အဆိုကတော့ ခပ်များများလို့ဆိုသကွ) စီးဆင်းတတ်တာက လွဲလို့ ကျန်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ချောင်းခြောက်သာသာ တွေ့ရတာလေ၊ ငါ့ မျက်မြင်မို့ ပြောတာပါ၊
L'Embouchure du Paillon sous le Pont des Anges à Nice (ဓါတ်ပုံ မရငတ)
အပြာရောင်မျိုးစုံနဲ့ မြေထဲပင်လယ်က ကမ်းရိုးတန်း Côte d’Azur ရဲ့ ပင်လယ်လှိုင်းနဲ့ ...... .. . …… မစီးတစီး မြစ်ရေစီးတို့ တွေ့ဆုံရာ Paillon မြစ်ဝ .. .... … ..…. .. .. .. ရဲ့ သဘာဝ အလှတရားပေါ့၊ အပြာက ရောင်စုံမှ တကယ့်ကိုစုံပါတယ် ပြောလို့ရမယ်၊ ဒါပေမယ့် … အချိန်က ကြာကြာမရလို့ ဒီမျှ လောက်သာ မှတ်တမ်းတင်ခွင့် ရခဲ့တာကွ၊ ငါ့ရဲ့ မိုင်ဖုန်း အစုတ်လေးနဲ့ ရိုက်ကူး ရတာမို့လို့ မျက်စေ့ ရှုတ်ပြီး အစဉ်မပြေတာတွေ တွေ့မိရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ ခင်ဗျာသာ ပြောချင်တယ်ကွာ၊ ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ https://www.youtube.com/watch?v=UdT-PGhcJ9U&feature=youtu.be အဲဒီ နေရာကနေ ရိုက်ကူးခဲ့တာလေးကို ကြည့်နိုင်ကြောင်းပေါ့၊
သူတို့တွေရဲ့ ပင်လယ်နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ မြစ်ဝတွေချောင်းဝတွေ ဆိုတာက အဲလိုကွ၊ အဲဒီလို နွေရာသီမှာ
ဆိုရင် ပင်လယ်အဝတွေမှာ အေးအေးလူလူ ငါးထိုင်မျှားလို့ရအောင် သာယာတယ်ကွ၊ ရေစီးရေလာ
တွေကလည်း မကြမ်းတမ်းဘူးလေကွာ၊ သူတို့ရဲ့ သဘာဝကပေးတဲ့ အနေအထားတွေက မင်းတို့ဆီ ငါတို့ဆီမှာထက် ကောင်းနေတာလေ၊
ငါကတော့ကွာ အဲဒီလို ရေ ခပ်တိမ်တိမ်နဲ့ ခပ်ခြောက်ခြောက် ချောင်းခြောက်လိုလိုမျိုးတွေ တွေ့ရရင် မြင်ရရင် ငါတို့ ခပ်ငယ်ငယ်က သွားခဲ့လာခဲ့ဖူးတဲ့ အညာက ချောင်းခြောက်တွေကို မြင်ယောင်မိတာ ကတော့ အမှန်ပါကွာ၊ မီတာတထောင် ပေပေါင်း သုံးထောင်ကျော်လောက် မြင့်မားတဲ့ တောင်တန်း တွေနဲ့ ကမ်းခြေရေပြင်ပြာပြာတွေရဲ့အကြားက အဲဒီလို ချောင်းခပ်ခြောက်ခြောက်တွေ အလှတွေကို
လာရောက်ခံစား ကြသူတွေက တနေ့တခြား များများလာတာကတော့ အမှန်ကွ၊ ဘယ်လောက်များ
များနေသလဲ ဆိုတော့ ဒီကနေ့လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ရဲ့ ခရီးသွား သန်း ၉၀၀ ကျော်ရဲ့ သုံးပုံတပုံကျော်က ဒီ နေရာကို နှစ်စဉ်လာနေကြပါတယ်တဲ့ကွာ၊ လူတွေ အလာများအနေများတော့လည်း တဘက်ကနေ သဘာဝတရားတွေက အနည်းနဲ့အများ ပျက်စီးတော့တာပေ့ါကွာ၊
ဒီအရပ်ဒေသရဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ သဘာဝအလှတွေရယ် ကောင်းမွန်နေသေးတဲ့ ရာသီဥတုမျှတမှု
သမိုင်းစဉ် တလျှောက်မှာ ထင်ရှားလှတဲ့ အရေးပါလှတဲ့ နေရာတွေက ဒီဒေသမှာ အများစု ရှိနေတာ ကြောင့်မို့လို့ တကမ္ဘာလုံး ခရီးသွားတွေရဲ့ သုံးပုံတပုံက ဒီဒေသဆီကိုသာ လာကြတယ် လာကြလိမ့် ဦးမယ် ဆိုတာကိုတော့ မင်း မယုံမရှိနဲ့ပေ့ါကွာ၊ ဒို့ မဟာ အရှေ့အာရှ တိုက်သားတွေရယ် အာဆီယံ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ခရီးသွားချင်စိတ်တွေ အများကြီးရှိနေတယ် ဆိုတာကို ဒီနေရာမှာ ကောင်းကောင်း တွေ့မြင်ရတယ်ကွ၊ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာ အဲဒီနေရာတွေရဲ့ သဘာဝက ပျက်စပြုနေပြီ ဆိုပေမယ့်
ငါတို့လို မြို့ပြရဲ့ သားကောင်တွေ အတွက်ကတော့ သာယာတဲ့ လှပတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ အပန်းဖြေချင် ဘွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်နေဦးမှာကတော့ အသေအချာပေ့ါကွာ၊
သူတို့လည်း Mediterranean Sea Against Pollution (Barcelona Convention 1976) ဆိုပြီး သဘာဝကိုသဘာဝအတိုင်း တည်ရှိနေအောင် ထိမ်းသိမ်းဖို့တွေ လုပ်ခဲ့ကြလုပ်နေဆဲတွေ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ အောင်မြင်နေပြီလဲ နေခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုတော့ သူတို့သာ ပိုလို့
ကမ္ဘာကြီး တခုလုံးမှာ အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းတွေကြောင့် ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲလာ နေသလို ဒီမြေထဲပင်လယ်ထဲမှာလည်း ငါးတွေအပင်တွေ နည်းပါလာတယ်ဆိုတယ်ကွ၊ အပူရှိန်တွေ
တိုးလာတာတော့ ကိုယ်တွေ့ပေ့ါကွာ၊ ပူလိုက်တာမှ တော်တော်ပူတယ်ပြောရင် ရနိုင်မယ်ထင်တယ်၊
ဒါတောင် ငါတို့ ရောက်သွားတာ နွေရာသီ အကုန်ပိုင်း ဖြစ်နေပြီနော်၊ ဒီကြားထဲမှာ တောမီးလောင်မှု
ဆိုတာကြီးကလည်း တကြိမ်မဟုတ် နှစ်ကြိမ်မဟုတ် ဆက်တိုက်လို ဖြစ်နေတယ်ဆိုပဲကွ၊ ငါတောင်
ငါရောက်နေတဲ့ တရက်နှစ်ရက်နဲ့ မျက်မြင်ကြုံခဲ့ရသေးတယ်၊ အနီးကပ်သွားကြည့်ရတာတော့ ဘယ်
‘ရှို့မီးလား တောမီးလား သေချာတော့ မသိ၊ ရှို့မီးဖြစ်ဖို့ကတော့ များကြောင်း ဆိုကြပါတဲ့ မီး .. .. ပါ၊
အဲဒီလို အမည်မသိ တောမီးလောင်နေတာ အခုရက်ပိုင်းလပိုင်းတွေမှာ အကြိမ်တော်တော်များနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ထုတ်ဖော် ငြီးငြူ နေကြပါပြီ၊ ဒီလို မြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးရာ နယ်စွန်နယ်ဖျား နယ်စပ်ဒေသတွေရဲ့ လုံခြုံမှုက မောင်ရင်ငတေတို့ မွေးဖွားကြီးပြင်း ခဲ့ရာ ဒေသတွေက လိုပါပဲလား …... ..... ဘယ်လိုပါလဲ . .... ..... တွေးမိရကြောင်းပါ၊ အခု မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့မြင်မိခဲ့တာကတော့ .. ..... နေမွန်းတည့်ချိန်က စတင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ မီးဟာ ... …. …... .... ညနေစောင်း ခြောက်နာရီကျော်အထိ အပြီးတိုင် မငြိမ်းသေးလို့ မီး ငြှိမ်းသတ်နေကြတဲ့ လေယာဉ်တွေ ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါ တွေ့ခဲ့ရတာပါ၊’
Casino de Monte-Carlo ခေါ်တာပေ့ါ၊ ပြင်သစ်တနိုင်ငံလုံးမှာ ကာစီနိုရုံ ၁၉၈ ရုံရှိပြီး မိုနာကိုမြို့ မှာ တော့ ကာစီနို လေးရုံ ရှိတယ်တဲ့ ကွ၊ အဲဒီ မွန်တီကာလို ကာစီနိုရုံကတော့ နာမည် ပိုကြီးတယ်ဆိုပဲ၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတာတော့ ငါသေချာ မသိပါဘူးကွာ၊ ဒါပေမယ့် ငါတို့ငယ်ငယ်က ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကျော်က ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဂျိမ်းစဘွန်းကား Jamais Plus Jamais (Never Say Never Again) ဆိုတာကို အဲဒီ ကာစီနိုရုံကြီးထဲမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာဆိုတော့ကာ ပေါ့သေးသေး မဟုတ်တာတော့ သေချာတာပေါ့ကွာ၊ ငါကတော့ ငယ်ငယ်က ကျောင်းသားဘဝထဲက ဖဲရိုက်ရင် လောင်းကစားလုပ်ရင် တခါဖူးမှ မနိုင်ခဲ့ဖူး ဘူးဆိုတော့ အဲဒါတွေကို ဝေးဝေးရှောင် ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီကွာ၊ ဒီအကြောင်းတွေကို နောင်တော့မှ သပ်သပ် ရေးဖို့ ကြိုးစားမယ်ကွာ၊ ရေးရမယ်ဆိုရင် အများကြီးကွ၊ အေးဆေးစောင့်ဖတ်ပေ့ါကွာ၊
ခုတော့ တော်သေးပြီကွာ၊ ကျန်းမာပါစေ . … …. ကျန်းမာပါ၏ . . … . ပေ့ါကွာ၊
(ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းက သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြေထဲပင်လယ်ခရီးအကြောင်းတွေ တပိုင်းတစ ရေးထားတာတွေထဲက အဆုံးသတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ . . . … …… … ** မြေထဲပင်လယ်ရေစီးသံ ** * ပါ၊ အဆုံးသတ်မရသေးလို့ ကျန်ရှိနေပါသေးတဲ့ အပိုင်းအစ အတိုအစများကိုလည်း ပြန်လည်ပေါင်းစုပြီး အချောသတ် ရေးရပါဦးမည်၊)
Libellés : ငါ့ ရင်ထဲမှာ ဧရာဝတီ, မြေထဲပင်လယ်ဆီသို့